Iyadoo loo marayo Filimanka, Fannaaniinta aan Fanka ku Dhicin waxay Sheegaan Sheekooyinkooda
Shabakada Saint Paul Neighbourhood Network (SPNN) waa xarun warbaahin bulshadeed oo aan faa'iido doon ahayn kuwaas oo awood u siinaya dadka inay isticmaalaan warbaahinta iyo isgaadhsiinta nolol wanaagsan, isticmaalaan cod sax ah si ay u sheegaan sheeko, ayna dhisaan faham guud. Markii la aasaasay 1984-kii si loo siiyo cod saxaafadeed dadka aan xaq u lahayn, SPNN waxay tan iyo markii ay noqotey qaab qaran oo kor u qaadaya farshaxanka warbaahinta bulshada.
Si loo xoojiyo ka qaybgalka farshaxanada beesha ee xiiseynaya filim fanka, SPNN wuxuu abuuray Doc U, oo ay maalgeliso qeyb ka mid ah machadka McKnight Foundation. Imtixaanku wuxuu bixiyaa aqoon, hagid iyo fursado 12 qof oo ka mid ah waqtiga oo loo marayo fasalo hordhac ah oo ku saabsan qorista, filimada iyo edebinta. In ka badan lix iyo toban todobaad, fasal 2014 ee Dok UU waxay barteen in ay abuuraan dokumentiyo toban daqiiqo ah. Filimkii ugu danbeeyay wuxuu diiradda saarey mawduucyo ka soo jeeday rabshad iyo rabitaan xoog leh oo ku saabsan rabshadaha qoyska si loo ogaado helitaanka ilaha cuntada ee magaalooyinka. Ka qaybqaatayaashu waxay masuul ka ahaayeen wax walba oo ka soo baxa wax soo saarka iyo waraysiga, si filim iyo farsamo.
"Waxaan dareemayaa sida aan helay. Waxaan ahay fanaan. Codkaygu wuu yimaadaa. Codkeyga ma ahan oo kaliya ayaa timid, cod kale ayaa yimid. " -AAD BARNAAMIJKA SOO SAARKA
Iyadoo loo marayo barnaamijka kaqeybgalayaasha waxay dareemeen in awood u leeyihiin in ay u sheegaan sheekooyinkooda naftooda iyo bulshada, "Waxay qaadatay waqti dheer si loo dhiso kalsoonidaas." Mid ka mid ah kaqaybgalayaasha ayaa yiri, "Waxaan dareemayaa sida aan helay. Waxaan ahay fanaan. Codkaygu wuu yimaadaa. Codkeyga ma ahan oo kaliya ayaa timid, cod kale ayaa yimid. "
Natiijada mashruuca ayaa ahayd baaritaan guud oo ka mid ah dukumiintiyadii kasta, oo ay ku xigto fadhiga Q & A. Ka qaybgalayaashu waxay ka hadlayeen waxyaabihii ay u hureen mashaariicdooda, iyo sidoo kale guulaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmeen intii lagu jiray geedi socodka. 150 qof ayaa ka qaybgalay xafladdan, kumanaan kalena waxay arkeen dokumintiyaal ku saabsan kanaalka SPNN iyo onlineka. Hal kaqeybgalaha ayaa la kulmay guul gaar ah ka dib markii uu fiidiyowgeeda ku soo rogay boggeeda Facebook iyo YouTube, iyada oo in ka badan 100,000 views, iyo in ka badan 2,000 oo saamiyo. SPNN waxay rajeyneysaa in ay sii wadi karto mashaariic badan oo lagu dhisayo beelaha kuwaas oo awood u siinaya dadka sida caadada u ah inay yihiin kuwo aan si rasmi ah u dhicin ama been-u-sheegin warbaahinta.